Email na Social Media Jugalbandi | Martech Zone
Email na Social Media Jugalbandi
Tọzdee, Febụwarị 20, 2014 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, anyị bipụtara otu inbound ahịa okuku N'ezie nke na-enye ozi ịntanetị 5 ezigara kwa izu (denye aha na taabụ na anyị gị n'ụlọnga saịtị). Otu n'ime usoro nke ozi ịntanetị na-elekwasị anya kpamkpam na ahịa email, nke anyị na-ezo aka na linchpin nke mgbalị ahịa ọ bụla. Otu okike na Ndị mọnk Email emepụtala ihe omuma a nke gosiputara njikọ… ma obu jugalbandi… nke email na ndi mmadu na otu uzo abuo a si kwado ibe ha.
A jugalbandi ma ọ bụ jugalbandhi bụ arụmọrụ na egwu oge gboo nke India, ọkachasị egwu ọdịnala Hindustani, nke na-egosi otu egwu nke ndị egwu abụọ. Okwu jugalbandi pụtara n'ụzọ nkịtị, "ejima ejikọtara." Duet nwere ike ịbụ olu ma ọ bụ ihe egwu.
Enwere m mmasị n'ọhụụ nke ejima ejima mgbe ọ na-abịa ahịa email na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ahịa ọ bụla ọzọ! Amachaghị m banyere Shakira na Beyonce, echere m na email na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Pịa site maka a zuru ezu echiche nke infographic.
Tags: beyonceemailjugalbandiShakiraelekọta mmadụ media
Zavers: Nkesa Coupon Dijitalụ sitere na Google